राजा र कांग्रेस बारे पुष्पलालको दृष्टिकोण — News of The World
दस्तावेजहरुको अध्ययन कसरी गर्ने ?
पुष्पलाल श्रेष्ठभाद्र २५, २०७५
दस्तावेजहरुको अध्ययन गर्दा आ–आफ्नो कमिटीमा सामूहिकरुपले छलफल गरी पढ्नु पर्दछ । विरोधीहरुका दस्तावेजहरु पढ्दा उनीहरुले हाम्रो विरुद्ध लगाएका अभियोगहरुको तालिका बनाउनु पर्दछ । अनि तिनका उत्तरहरु तपाईहरुले हाम्रा दस्तावेजहरुमा नै पाउनु हुनेछ ।
सम्पूर्ण राजनैतिक तथा सामाजिक शक्तिहरुका दस्तावेजहरु पनि संकलन गरी तिनको पनि गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी छ । यस्तो अध्ययन बिना देशका विभिन्न राजनैतिक तथा सामाजिक शक्तिहरुको गतिविधिबाट परिचित हुन सक्दैनौँ । फलतः हामी एकसुरे हुनेछौँ । अरु शक्तिहरुको सुर थाहा नपाइकन हामी आफ्नो सुर पनि तयार गर्न सक्ने छैनौँ । हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि राजनीतिमा स्थायीरुपबाट कुनै पनि अन्य शक्ति मित्र र दुश्मन हुन सक्दैन । आजको मित्र शक्ति भोलिको दुश्मन हुन सक्दछ । यी सबै देशको राजनैतिक स्थितिमा परिवर्तन आउनसाथै विभिन्न वर्ग तथा वर्गस्तरको आपसी सम्बन्धमा परिवर्तन देखिन थाल्दछ । यसले गर्दा राजनैतिक तथा सामाजिक शक्तिहरुको नीतिहरुको गहिरो अध्ययन गर्नु अति आवश्यक छ, मुढे बल या छलकपटबाट क्रान्ति हुँदैन । क्रान्तिका निश्चित नियम अनुसार नै क्रान्ति हुन्छ ।
आज म यस लेखमार्फत पार्टीका साथी, समर्थक, हितचिन्तक र नेपालको जनवादी आन्दोलनमा चाख राख्ने समस्त प्रगतिशील साथीहरुको अगाडि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दस्तावेजहरुको अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा केही सुझावहरु पेश गर्न आवश्यक सम्झन्छु । किनभने नेपाली जनक्रान्तिका विरोधी, अवसरवादी तथा विभिन्न स्वरुप लिए आएका संसोधनवादीहरुले दस्तावेजका उद्धरणहरुको अर्थको अनर्थ गरी प्रयोग गरेर नेपालको जनवादी तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भ्रम पैदा गर्ने कुचेष्टा गर्दैछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मत भिन्नता देखापरेको हुनाले त्यसैको प्रतिविम्ब नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि विभिन्न विचारधाराहरु देखिन आए भन्ने एक गलत धारणा छ । अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनमा मत विभाजन भएपछि त्यसको असर हाम्रो देशमा परेन भन्ने होइन, अवश्य पनि पर्यो तर हाम्रो देशको कम्युनिष्ट आन्दोनलमा देखिएका विभिन्न विचारधाराको मुलकारण नेपालको नयाँ जनवादी आन्दोलनको निर्माणको विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नहरु हुन् । हाम्रो देशमा मतभेदको प्रारम्भ र विकास अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मत विभाजन आउनु भन्दा धेरै पहिले देखि भएर आएको हो । हाम्रो पार्टीमा विवादको विषय राजा र नेपाली कांग्रेसप्रति हाम्रो नीति के हो ? देशमा किसान आन्दोलनको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ ? पूँजिवादी जनवादी क्रान्तिमा मजदुर वर्गको भूमिका के कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने आदि मौलिक विषयहरुलाई लिएर भएको हो । यी प्रश्नहरु आ–आफ्नो देशको विशष्टि ऐतिहासिक परिस्थिति अनुसार रुसमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको निर्माणको सन्दर्भ पनि उठेका थिए र साथै चीनको कम्युनिष्ट आन्दोलन निर्माणको सन्दर्भमा पनि ।
नेपालमा नयाँ जनवादी आन्दोलनको निर्माणको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरुको सहि समाधान निकाल्नका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आएको मत विभाजनको अध्ययनमात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको निम्ति नेपालमा यी प्रन्नहरु कसरी कुन अवस्थामा आए र पछि यिनीहरुले के कस्तो रुप लिँदै गए भन्ने कुराको सहि जानकारी हुन आवश्यक छ । हाम्रो देशमा नयाँ जनवादी आन्दोनलको निर्माणको सन्दर्भमा राजावादी रुझान राख्ने र २०१७ को काण्डपछि शाही गुप्तचरको रुपमा काम गर्ने गद्धार माझी गुटले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोनलको मत विभाजन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संसोधनवादको पक्ष लियो । गद्धार माझीको विरुद्ध हाम्रो साथ बसी काम गर्ने अरु कतिपय साथीहरुले अवसरवादी चाल खेली भेलामा माछा छोप्ने नीति अपनाएझैँ देशमा माओ विचारधाराको बढ्दो प्रभाव देखि एकातिर आफूलाई माओवादी करार दिए भने अर्कोतिर माक्सर्ववाद–लेलिनवाद– माओत्सेतुङ विचारधाराको आधारमा संगठित भएको हाम्रो पार्टीको विषयमा नानाथरिका भ्रमहरु फैलाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई टुक्याई शाही पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा आ–आफ्नो सेवा अर्पण गर्नको निम्ति होड लगाईरहेका छन् । उनीहरुको मुख्य उद्देश्य नै आजको अवस्थामा समस्त नेपाली जनताको साझा दुश्मनको रुपमा स्पष्ट रुपमा देखिएको राजा तथा राजतन्त्रद्वारा नेतृत्व गरिएको सामन्ती आधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध उठेको संयुक्त संघर्षलाई वत्याउने भएर आएको छ । उनीहरुले अनेकौँ लफ्फाबाजी गरी राजतन्त्रको विरोधमा उठेको आन्दोलनको जोडलाई लफ्फाबाजी गरी राजतन्त्रको विरोधमा उठेको आन्दोलनको जोडलाई कम गर्दै क्रमशः राजतन्त्रको समर्थनमा पु¥याउन चाहन्छन् जसरी गद्धार माझीले सामान्तवादको विरोधमा उठेको आन्दोलनको जोडलाई कम गर्दै क्रमशः १०१७ सालमा राजाको समर्थनमा पार्टीलाई पु¥याउने कुचेष्ट गरेको थियो ।
पार्टीको तेस्रो ऐतिहासिक सम्मेलनपछि हाम्रो पार्टी आज देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र पार्टीको रुपमा विकसित भएर आएको छ । अरुहरु आपतमा नै अल्झोबल्झो विभिन्न गुट उपगुटमा विभक्त हुँदैछन् । तेस्रो ऐतिहासिक सम्मेलनका दस्तावेजहरु मौलिक रुपले सही भएको हुनाले नै हाम्रो पार्टीले अनेकौँ झुठा र भ्रमपूर्ण प्रचार हुँदाहुँदै पनि यसरी विकास गर्न सकेको हो । पार्टी अभिवृद्धिको नियम नै विभिन्न भड्काउहरुको विरुद्ध निरन्तर चलिरहने भित्रि पार्टी संघर्ष हो । यस भित्री पार्टी संघर्षमा एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ ।
आज देशमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भएका विकासले गर्दा कानेखुशी र मौलिक भ्रमपर्ण प्रचारले विशेष असर गर्न छाडेको छ । अतः ती व्यक्तिहरुले अनेकौँ छदमभेषी नामबाट विभिन्न पुस्तक पुस्तिका, पत्रपत्रिका तथा सँगालोहरु प्रकाशित गरी हाम्रा दस्तावेजहरु बंग्याइ उद्धरण गरी अर्थको अनर्थ गर्ने कुचेष्टा गर्दैछन् । आज लिखित रुपमा हाम्रो विरुद्ध जुन साहित्यहरु आएका छन् तिनीहरुको हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ । कारण लिखितमको अगाडि वकितमको केही लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा अब हामीहरुले पार्टीका दस्तावेजहरुको अध्ययन गर्न अति जरुरी छ । अतः म पार्टीका साथी, समर्थक, हितचिन्तक तथा देशको जनवादी आन्दोलनमा चाख राख्ने समस्त प्रगतिशील तत्वहरुसँग निम्नि लिखित अपिल गर्न चाहन्छु ।
१) पार्टीका समस्त प्रकाशनहरुको सँगालो गर्नोस् । अरु पनि सबै पार्टी तथा गुट उपगुटका दस्तावेजहरुको सँगालो गर्नोस् ।
२) हाम्रा दस्तावेजहरुले राजा, नेपाली कांग्रेस अन्य पार्टी, संयुक्त मोर्चा, संगठनात्मक तथा संघर्षको नीतिको सम्बन्धमा के के भनेका छन् ? छुट्टाछुट्टै शिर्षकमा टिप्नोस् । त्यसैगरी हाम्रा विरोधी तथा अरु विरोधी पार्टीहरुले के भनेका छन्, टिप्नोस्।
३) अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हाम्रो भनाइ र अरुहरुको भनाइ के कस्तो छ ? टिप्नोस ।
यस प्रकारले अध्ययन गर्दा देशको राजनीतिमा हाम्रो र अरुको भनाई के कस्तो छ भन्ने कुरा सबैमा स्पष्ट हुनेछ । यस प्रकारको अध्ययनले हाम्रो पार्टीमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक, संगठनात्मक तथा संघर्षमा एकताको बृद्धि गर्नेछ र विरोधीहरुलाई परास्त गर्नेछ ।
उदाहरणको निम्ति अन्य पार्टी तथा संघर्षको सम्बन्धमा केही उद्धरण तल दिन चाहन्छु ।
हाम्रो क्रान्तिको लक्ष्य –“आजको हाम्रो क्रान्तिको लक्ष्य(१) नेपालबाट सम्पूर्ण सामान्ती शोषण र यसको रक्षा गर्ने किल्लाका रुपमा काम गरिरहेको शाही पञ्चायती राज्ययन्त्रलाई समुल नष्ट गर्नु तथा (१) विदेशी एकाधिकार पूँजिवाद, खास गरी भारतीय एकाधिकार तथा अमेरिकी साम्राज्यवादीलाई खतम गर्नु हो ।” (नयाँ जनवादी कार्यक्रम) ।
यो लक्ष्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र नभई देशको समस्त प्रगतिशील सामाजिक वर्षको लक्ष्य हो । यसमा शंका छैन । यस्तो लक्ष्य गति अन्य पार्टीहरुको के कस्तो नीति रहेको छ ? यस सम्बन्धमा पनि नयाँ जनवादी कार्यक्रममा स्पष्ट भनिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस :– “नेपाली कांग्रेसको चरित्रले हाम्रो देशको कमजोर पूँजिपति वर्गको दोहोरो चरित्रलाई स्पष्ट रुपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ । नेपालको पूजिपति अर्थसामान्ती तथा अद्र्धऔपनिवेशिक देशको पूँजिपति वर्ग भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विदेशी पूँजिवादसँग यसको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ भने राष्ट्रिय क्षेत्रमा भूमिबाट हुने शोषणमा पनि यसको ठूलो सम्बन्ध छ । यसको यस्तो दुई प्रकारको शोषण नीतिमा भरपर्ने चरित्रले गर्दा न त राष्ट्रिय क्षेत्रमा साम्राज्यवाद तथा विदेशी पूँजिको नै विरोध गर्न सक्दछ । तर दुवैसँग यसको असंगति पनि रहेको देखिन्छ । तसर्थ आफ्नो स्वार्थ रक्षाको निम्ति यसले आफ्नो कार्यक्रममा स्थिति अनुसार एउटाको विरोध गर्नु अर्काको सहयोग लिँदै आफ्नो राष्ट्रिय वर्गाधार र क्षेत्रलाई बृद्धि गर्ने इच्छा पनि राख्दछ । पूूर्ण साम्राज्यवाद विरोधी नभएको हुँदा यसले जनआन्दोलनको बाटोभन्दा कुटनैतिक विरोधी दबाब र दरबारिया राजनीतिमा बढ्ता विश्वास र भरपरी कदाचित्त आन्दोलनमा उत्रेतापनि यस्तो आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुङ्ग्याउँदछ । अतः वर्गीय चरित्रको कमजोरीले गर्दा यस पार्टीले देशमा देखापरेको मुल अन्तरविरोधको समाधानको निम्ति हुने सामन्तवाद विरोधी प्रजातान्त्रिक क्रान्तिलाई नेतृत्व दिन सक्दैन भन्ने कुराको शिक्षा हामीलाई विगत इतिहासले दिन्छ ।” (नयाँ जनवादी कार्यक्रम)
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ कि आजको नेपालको मुल समस्याको सकाधान गर्ने कृषि क्रान्तिको नेतृत्व गर्न नेपाली कांग्रेस असमर्थ छ । सामान्तवाद र विदेशी शक्तिहरुसँग सम्बन्धको साथै नेपाली वर्गाधारको वृद्धिको निम्ति अन्तरविरोध पनि राख्दछ । अतः नेपाली कांग्रेसप्रति हाम्रो एकता र संघर्षको नीति हुनेछ ।
अन्य पार्टीहरु :– “नेपाल प्रजा परिषद्, राष्ट्रिय कांग्रेस तथा संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी आदि तथाकथित प्रजातान्त्रिक पार्टीका नेताहरुको अतितमा निश्चिय नै केही क्रान्तिकारी भूमिका रहेको छ तर सात सालको क्रान्तिपछि यो पार्टीहरुले मुख्यतः सामान्ती वर्गका नेता, राजा र नेपालको पूँजिवादी जनतान्त्रिक शक्ति बीचको अन्तरद्वन्द्वमा हमेशा राजदरबारको आडमा उभिइ पूँजिवादी जनतान्त्रिक अधिकारको हरण गर्नेमा राजाको शक्तिलाई मजबुत पार्ने तथा देशको जनतान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर पार्ने काममा अग्रीम भूमिका खेल्दै आएका छन् । ……. यी पार्टीका नेताहरुले यदाकदा राजाको व्यवस्थाप्रति असन्तोष व्यक्त गरेतापनि उपरोक्त कार्यहरुले यिनीहरुको चरित्र उदारवादी सामान्तको जस्तो देखाउँछ । यस्ता पार्टीहरुबाट सामान्तवाद विरोधी क्रान्ति सम्पन्न हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।” (नयाँ जनवादी कार्यक्रम)
यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि उनीहरुलाई जनतान्त्रिक संघर्षको विरुद्ध जान नदिई व्यवस्थाको विरुद्ध उतार्ने नीति कम्युनिष्ट पार्टीको नीति हो ।
क्रान्तिको नेतृत्वको सम्बन्धमा :- “नेपालको राष्ट्रिय आन्दोलनको शिक्षाले सावित गर्दछ कि आजको नयाँ ऐतिहासिक युगमा चलाइने सामान्त विरोधी तथा स्रामाज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको नृेतृत्व नेपालको पूँजिपति वर्गले गर्न सक्दैन । मजदुरवर्गमा सबैभन्दा वैज्ञानिक क्रान्तिकारी तथा माक्र्सवाद–लेनिनवादले लैस भएको हुँदा आजको नयाँ एतिहासिक युगमा अझै आजको नेपालको विशष्टि ऐतिहासिक स्थितिमा यस्तो क्रान्तिको नेतृत्व मजदुरवर्गको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र गर्न सक्दछ ।” (नयाँ जनवादी कार्यक्रम)
कार्यनीतिको सम्बन्धमा :– आजको क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति नेपालको मजदुर वर्गको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफूभन्दा भिन्न सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक मत राख्न राजनैतिक तथा सामाजिक शक्तिहरुलाई पनि यस शाही अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध एकजुट गराउने सम्बन्धमा पहल कदमी लिनुपर्दछ, भन्दै नयाँ जनवादी कार्यक्रममा भनिएको छ :-
“आजको स्थितिमा यो (सामान्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था) नै साझा दुश्मनको रुपमा देखापरेको छ । आज सामान्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थासँग अन्तरविरोध राख्ने सामन्त वर्गा तथा वर्गस्तरहरुसँग एकता कायम गर्ने र मुख्य रुपले आफनो सम्पूर्ण शक्ति पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलन उठाउनमा लगाउने कार्यनीति हुनुपर्दछ । किनकी सामान्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलन नै आजको स्थितिमा मुख्य मिलनको विन्दु हो ।”
क्रान्त्रिको बाटो :– “दीर्घकालिन शसत्र किसान क्रान्तिको सञ्चालन विना यस्तो व्यवस्था(नयाँ जनवादी व्यवस्था) को स्थापना हुन सक्दैन । ”(नयाँ जनवादी कार्यक्रम)
अन्तर्राष्ट्रिय सैद्धान्तिक विवादमाः– “आज अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जुन सैद्धानितक मतभेद देखा पर्न आएको छ त्यो दुई पार्टी बीचको झगडा नभई दुई दृष्टिकोणको संघर्ष हो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सैद्धान्तिक मतभेदको प्रश्न आज मात्र उठेको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको मुल्यांकनको आवश्यकताको बखत यी प्रश्न बेलामौकामा उठ्दै आएको छ प्रत्येक पल्ट सैद्धान्तिक मतभेद उठ्दा पक्ष विपक्षको साथै एक तटस्थवादी नीति अपनाउने गुट अन्तमा गई संसोधनवाद तथा अन्तराष्ट्रवादको दलदलमा फस्न गएको छ । अतः यिनीहरुका पनि त्यहि गति हुने थियो, जुन यिनको पुर्खाको हुँदै आएको छ ।”(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तेस्रो एतिहासिक सम्मेलनको महत्वबाट)
“आधुनिक संसोधनवादले जोड पक्ड्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको विरुद्ध सोभियत संसोधनवादीहरुले विभिन्न पार्टीहरुमा आफ्नो गुट तयार गर्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा पार्टीहरुको बीचमा सम्पर्कका सिद्धान्तहरु के कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने चर्चा प्रत्येक देशको कम्युनिष्ट पार्टीमा उठ्न थाल्यो । यस प्रश्नको ठहर एकासी देशका कम्युनिष्ट पार्टीका मास्को सम्मेलनमा भयो । यस सम्बन्धमा उक्त घोषणापत्रमा लेखिएको छ । “एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको गतिविधिको सम्बन्धमा केही कुराहरु स्पष्ट गर्न चाहेमा एकले अर्को पार्टीको नेतृत्वसँग सम्पर्क राख्नेछ । यदि आवश्यक भएमा आपसमा बैठक र सरसल्लाह गर्नेछन् ।”
“तृतीय अन्तर्राष्ट्रियको विघटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई निर्देशन गर्ने वैधानिक अधिकार कुनै केन्द्र नभएको हुँदा यो सिद्धान्त अपनाउन परेको हो । अतः हामीले यसै सैद्धान्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय पार्टीसँग सम्बन्ध गर्ने आधार बनाउनु पर्दछ ।” (सिंहावलोकन)
साथीहरु ? उपरोक्त उद्धहरणहरुले हाम्रो नीति, संर्षको नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सैद्धान्तिक विवादमा हाम्रो पार्टीको मत स्पष्ट रुपले व्यक्त गरिएको हामी पाउँदछौँ । तर शाही दलालहरुले हाम्रो पार्टीप्रति भ्रम उत्पन्न गर्नको निम्त हाम्रा दस्तावेजहरुलाई तोडमोड गरी पेश गर्न थालेका छन् । यस्तो स्थितिमा हामीले आ–आफ्नो सैद्धान्तिकस्तर उठाउनको निम्ति माक्र्सवादका मौलिक पुस्तकहरु पढ्नुपर्दछ भने अर्कोतिर हाम्रा दस्तावेजहरुको माथि दृष्टान्तको निम्ति दिएको तरिका अपनाई अध्ययन गर्नुपर्दछ ।
हामीले आज देशमा क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निम्ति आफूलाई मात्र बुझेर पुग्दैन । अरुहरुलाई पनि बुझ्नु पर्दछ । भनाइको मतलब हो जुन देश र समाजमा हामीहरुले काम गरिरहेका छौँ, त्यसै देश र समाजमा अरु विभिन्न राजनैतिक तथा सामाजिक शक्तिहरुले पनि काम गरिरहेका छन् । अतः तो सम्पूर्ण राजनैतिक तथा सामाजिक शक्तिहरुका दस्तावेजहरु पनि संकलन गरी तिनको पनि गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी छ । यस्तो अध्ययन बिना देशका विभिन्न राजनैतिक तथा सामाजिक शक्तिहरुको गतिविधिबाट परिचित हुन सक्दैनौँ । फलतः हामी एकसुरे हुनेछौँ । अरु शक्तिहरुको सुर थाहा नपाइकन हामी आफ्नो सुर पनि तयार गर्न सक्ने छैनौँ । हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि राजनीतिमा स्थायीरुपबाट कुनै पनि अन्य शक्ति मित्र र दुश्मन हुन सक्दैन । आजको मित्र शक्ति भोलिको दुश्मन हुन सक्दछ । यी सबै देशको राजनैतिक स्थितिमा परिवर्तन आउनसाथै विभिन्न वर्ग तथा वर्गस्तरको आपसी सम्बन्धमा परिवर्तन देखिन थाल्दछ । यसले गर्दा राजनैतिक तथा सामाजिक शक्तिहरुको नीतिहरुको गहिरो अध्ययन गर्नु अति आवश्यक छ, मुढे बल या छलकपटबाट क्रान्ति हुँदैन । क्रान्तिका निश्चित नियम अनुसार नै क्रान्ति हुन्छ । अतः तो नियमहरुको जानकारीको निम्ति हामीले आफ्नो दस्तावेजका साथै अन्य राजनैतिक तथा सामाजिक शक्तिका दस्तावेजहरुको गहिरो अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ ।
हाम्रो राजनीतिको व्यवहार क्षेत्र हाम्रो आफ्नै देश, जनता र समाज हो । हाम्रो आफ्नो राजनीति या भनौँ मुल विचारधाराको उद्गम स्रोत हामै समाज हो । हाम्रो आफ्नो विशिष्ट इतिहास छ । आजको नेपालको जन्म हिजोको नेपालबाट भएको हो । हाम्रो राष्ट्रको हजारौँ वर्षको इतिहास छ । हाम्रो इतिहासका आफ्ना विशेषता छन् । हामीले नेपालको विषयमा अध्ययन र खोज गर्न पर्ने प्रशस्त कुरा छन् ।’ ती सबै कुराको अध्ययन बिना नेपाली समाजको विशिष्टताका थाहा लाग्न सक्दैन र साथै नेपाली समाजमा अशिक्षित नियमहरुको पनि । यो ज्ञान भण्डारको विषयमा अझै हामी स्कुलले बच्चा झैँ छौँ । आजको नेपाल हिजोको नेपालबाट विकास भएका आएको हो । हामीहरुले इतिहासप्रति माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा विश्वास राख्ने भएको हुनाले आफ्नो सम्पूर्ण पूर्व इतिहासको अध्ययनबाट आफूलाई अलग इतिहासका निछाड खिची मूल्यवान परम्परालाई लिने र गलत परम्परालाई छोड्ने गर्नुपर्दछ । त्यसै गर्नाले आजका महान संघर्षलाई नेतृत्व गर्न सक्नछौँ ।
तेस्रो ऐतिहासिक सम्मेलनभन्दा पहिले लुप्तप्रा भएको पार्टीको क्रान्तिकारी प्रतिमालाई त्यसपछि क्रमशः पुन स्थापित गरी आज हाम्रो पार्टी पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्पको रुपमा देखा पर्न आएको छ । आज हाम्रा पार्टीको जिम्मेदारी बढेको छ । यस जिम्मेदारीलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्नको निम्ति हाम्रा साथीहरुले आ–आफ्नो सैद्धान्तिकस्तर उठाउनु पर्दछ । माथि भनिएझैँ गरी दस्तावेजहरुको अध्ययन गर्दा आ–आफ्नो कमिटीमा सामूहिकरुपले छलफल गरी पढ्नु पर्दछ । विरोधीहरुका दस्तावेजहरु पढ्दा उनीहरुले हाम्रो विरुद्ध लगाएका अभियोगहरुको तालिका बनाउनु पर्दछ । अनि तिनका उत्तरहरु तपाईहरुले हाम्रा दस्तावेजहरुमा नै पाउनु हुनेछ । विरोधीहरुका दस्तावेजहरु पढ्दा तिनमा देखिएका अन्तरविरोधको पनि तालिका बनाउनु पर्छ । यसरी सामूहिकरुपले अध्ययन गर्दा समाधान हन नसकेका प्रश्नहरु लेख पठाउनुु होला ।